Qorfe 1.4 la heli karo | Laga soo bilaabo Linux
Qorfe 1.4 ayaa la heli karaa
In kastoo blog rasmi ah weli si rasmi ah looguma dhawaaqin, horey ayaa loo helay Cinnamon 1.4 oo leh astaamo iyo sixitaan badan oo cusub. Warku wuxuu iiga yimaadaa webupd8 isbedelada waxaa ka mid ah:
Habka wax ka beddel guddiga.
Tufaax cusub oo loogu talagalay Qalabka Cinnamon kaas oo aan dib ugu bilaabi karno Qoraxda, Bilow Raadinta muraayadda, soo celi goobaha aasaasiga ah, si dhakhso ah u hel xulashooyinka guddiga, iyo xulashooyinka kale.
Ikhtiyaarka kaliya loo isticmaalo Goobta Shaqada ee kormeeraha guud
Tifatiraha liiska (fargeeto ah Alacarte)
Taageerada luqadda RTL
Lagu daray 'La arki karo dhamaan kombuyuutarrada' iyo 'Move to Desktop ..' ee liiska daaqadaha.
Hagaajinta waxyaabaha la jecel yahay. (Codsi ayaa lagu dari karaa adoo jiidaya oo ridaya)
Dayactirro kale ..
Waxaan sidoo kale haysannaa ikhtiyaar aan ku dhaqaajino kululeeyaha liiska daaqadaha ama desktops-yada:
Cinnamon 1.4 keydad ayaa la heli karaa Linux Mint 12. Ama waxaan ku rakibi karnaa Ubuntu adoo adeegsanaya waxyaabaha soo socda PPA.
Dhankeyga waxaan sugayaa in meelaha la keydiyay la casriyeeyo LMDE.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Muuqaal / Shakhsiyeyn » Qorfe 1.4 ayaa la heli karaa
Mashruucani si tartiib tartiib ah ayuu u soo hagaagayaa, waxaan rajeynayaa in waqtiga la soo saarayo nooca cusub ee 'mint', qorfaha ayaa aad u soo dhalaali doona
Waan ka booday markabkii Ubuntu markii ay soo ifbaxday Midnimada, Gnome-Shell isaguna kuma qancin, taas oo igu kaliftay inaan u weecdo beddelka KDE.
In kasta oo aan jeclahay KDE, waxaan u arkaa qorfaha mashruuc xiiso leh oo mid ah, markii waqtigu yimaado, igu celin kara deegaanka Gnome 3. Marmarka qaarkood waxaan helaa nostalgic, haha.
Wax la mid ah ayaan ku fikiray, laakiin kordhinta qolofta gnome, waan fiicanahay.
Aniga sidoo kale .. qolofta gnome oo lagu daray 'O /
Waxaan nahay si isku mid ah, waxaan kaliya isku dayay qorfe, laakiin taasi ima qanciso, xilligan aan ku fiicanahay Gnome Shell 🙂
in fiican .. inbadan iyo in ka badan waxay i xasuusisaa markii compiz la isticmaalay ejejeje .. waad arki doontaa, si dhakhso ah qorfe wuxuu sameyn doonaa saameynta cube xD wax yar ayaa ka dhiman
Waa dadaal wanaagsan, ma jecli qorfaha, waxaa jira waqtiyo aan muuqaal ahaan ku daalayo qolofta gnome ka dibna waxaan u baahanahay bar hoose oo aan ku rakibo qorfe.
Hadda waxaan dhibaatooyin ku qabaa qorfe.
Daaqadda ayaan la arki karin marka la riixayo batoonka midig ee midig.
hanbalyo .. ku soo dhawaada aduunyada lint mint - qorfe ..
Waa hagaag aabbe waxa aan kuu sheegayo waa been .. sug inaad eegto haddii ragga halkan jooga ay ku caawin karaan. iska caabi !!
Waad ku mahadsantahay soo dhaweynta lint mint, laakiin waxaan ahay daacade Arch: D.
Hadda iyada oo qorfe 1.4 wax la hagaajiyay laakiin cayayaanka qaarkood.
Hadana haddii aad qaanso kujirtid, maxaad u isticmaali weyday jawi dhab ah sida KDE ama Gnome Shell?
Qof kastaa wuxuu jecel yahay waxyaabo kala duwan, Xfce, LXDE, xitaa WM sida OpenBox ama kuwa kale, qaar badan oo iyaga ka mid ah waxay u arkaan wax weyn 😀
Waan jeclahay KDE laakiin waa ku culus tahay kumbuyuutarkeyga.
Waxaan isku dayay Fedora, Kubuntu, Arch, OpenSuse dhammaantoodna wax badan ayey cunaan.
Gnome Shell Waxaan u isticmaalaa keyd ahaan, hada qorfe dhibka i siiyaa waa midka aan isticmaalo.
Miyaad isku dayday inaad naafo ka dhigto Akonadi, Nepomuk, iyo KDE saamaynta garaafka?
Environment Jawiga dhabta ah sida KDE ama Gnome Shell
Kuwa aynaan isticmaalin KDE o GNOME Shell waxaan isticmaalnaa bey'adaha beenta ... markaa markaa waxaan ku noolaa shan sano oo la khiyaaneeyey maxaa yeelay tan iyo intii aan isticmaalay GNU / Linux Weligay ma isticmaalin KDE o GNOME Shell Neef ur!
aan dib ugu noqonno aasaasiga:
- deegaan la mid ma aha sida shel
- Shel waa maaskaro ama qolof dul socota deegaan ama ka samaysan jawi laftiisa.
taas oo ah, in si cad loo hadlo oo wax la xoqo:
- midnimadu waa qolofka deegaanka qolofta gnome
- qorfe waa qolof gnome
Waxaan kuu sheegayaa inaan khaldanahay, waan aaminsanahay taas Midnimo, GNOME Shell y Qoraxda ahaayeen ahaayeen "qolofka" of GNOME3 laakiin hadda waxaan ogaaday inaanay sidaas ahayn.
Mahadsanid kun 🙂
waa in aadan ahayn! Sifiican ayaad u sharaxaysaan, Gnome 3 waa deegaanka iyo qolofka, yacni, qolofku waa midnimo iyo qorfe ... xitaa muuqaalka gnome 3 leeyahay sidoo kale waa qolof .. waa sababta loogu magac daray qolofta gnome.
Waan ku faraxsanahay inaad fahantay 😉
Hem ... tani waa waxa igu wareeray:
Yihiin Midnimada y Qoraxda, qolof GNOME Shell ama GNOME3? Sababtoo ah inta aan fahmay Qolof GNOME, Midnimada y Qoraxda waa saddex ka mid ah bay'ada loo isticmaali karo GNOME 3. Mate waa mid kale oo iyaga ka mid ah ...
Maya Tina, Qolofta Gnome, Midnimada y Qoraxda uu Shell (Shell, Shells or anything you want to call it) Gnome 3.
Aan dhahno Gnome waa jirka bini'aadamka, qorfe, Midnimo ama Gnome-Shell waa dharka jidhka la dhigo are
Mahadsanid kun Elav
Hada, miyaanay qolofku abuureyn jawiyo kala duwan GNOME 3?
Waad ku mahadsantahay hormarinta Elav
Adaa mudan Tina. Sida aan u arko Gnome 3 wuxuu ahaa sida taxanaha ah canaasiirta iyo qaybaha ka kooban Deegaanka Desktop (Codsiyada, Qalabka, Maareeyaha Qaabdhismeedka ... iwm) .. Si loo qaabeeyo walxahaas Gnome 3 wuxuu adeegsadaa 2 hab "si rasmi ah": Gnome FallBack y Qolofta Gnome.
Sax, sidoo kale waa .. Gnome 3 waa jirka (deegaanka), waxaad aragtayna waa: Gnome Shell, qorfe ama midnimo.
Hada su’aasha cajiibka ah ee maalinta 😀 SHAFT 3dan dhar midkee ayaad ugu jeceshahay?
c) qolof gnome
Uff… su'aal wanaagsan hahaha. Hada Midnimo wax badan igama dhibayso, halka Gnome-Shell ay i dhibto, waxaan u arkaa mid aan wax soo saar lahayn. Qorfe Sifiican ugama aanan tijaabin, waxaan kaliya arkay sida asxaabteyda u adeegsado ... sidaa darteed ma lihi fikrad dhab ah oo ujeedkeedu ku saabsan yahay 🙂
Aynu nidhaahno Gnome waa jirka bini'aadamka, qorfe, Midnimo ama Gnome-Shell waa dharka jidhka la dhigo
Mahadsanid kun KZKG ^ Gaara y Elav, fikradahaas aad ayey iiga muuqdaan, runti waan fahmay muddo dheer, waxa igu wareersan waa waxa ay leedahay Jamin samuel casharkaaga aasaasiga ah:
Inta aan ka ogahay Midnimada waa qolof horumartay aad uga fog GNOME Shell y Qoraxda waa fargeeto ah GNOME Shell. Waxaan kaloo fahansanahay inaadan isku adeegsan karin laba qolof waqti isku mid ah ... midkood ama mid kale waad adeegsaneysaa. Marka sidee bay noqon karaan Midnimada y Qoraxda qolof qolof kale ah sida la sheegay Jamin samuel.
Maxay tahay sababta aan ugu adkeysanayo inaan tan si fiican u caddeeyo? Sababtoo ah tani waa nooca farsamada ee jahwareerisa dadka cusub ee aan wax badan ka aqoon cirridka hargabka. GNU / Linux
Dhanka kale, maxaan ka fahmay deegaanka? Aniga ahaan waa dhowr sawir iyo waxyaabo garaaf ah oo matalaya macluumaadka iyo ficilada laga heli karo is dhexgalka isla markaana u oggolaanaya wada xiriirka u dhexeeya isticmaalaha iyo nidaamka qalliinka. Ma yihiin GUI si fiican. Sidaa darteed waan fahmay taas Midnimada, GNOME Shell y Qoraxda waa deegaan kala duwan in kasta oo ay leeyihiin "maamule" guud GNOME 3
markaan tixraaco "qolof" waxaan ula jeedaa "qolof" - qolof loo tarjumay Isbaanish micnaheedu waa qolof.
Gnome 3 kaligiis ma yimaado, wuxuu la yimaadaa dharkiisa si fiican u labisan 😀 Waxaan ula jeedaa inuu la yimaado qoloftiisa .. laakiin waa maxay magaca qoloftaas gnome? fudud: «Gnome shell» ejejeje halkaas malahayn male-awaal ay ku ogaadaan sida loogu bixiyo magac 😛
Arrintu waxay tahay, kaniisaddu ma jecla dharka gnome xiran yahay, sidaa darteed waxay go'aansadeen inay dhar cusub u sameeyaan gnome3 waxayna ugu magac dareen midnimo
lint mint markii ay arkeen tan, waxay dhaheen: si fiican gnome3 ayaa la imanaya isagoo dharkiisa xidhan waxayna u bixiyeen magaca qolofta gnome .. dharka 😀 wayna sameeyeen iyada magaceeduna waa Qorfe ...
Of Saddexdaan dhar midkee ayaad ka jeceshahay?
Midnimada sida GUI kumbuyuutarka kumbuyuutarka ah ayaa iga dhigaya mid aad u xun. Waa fikrad shaqsiyeed, waan cadeeyay. Laakiin dhinaca kale waxay iga dhigeysaa mashruuc ugu xiisaha badan mobilada, kiniiniyada iyo TV-yada
GNOME Shell Ma ka helin. Arrinta fidinta ayaa wali ah mid qasan waxayna sidoo kale abuurtay dhibaatooyin gaar ah barnaamijyada qaar, sida basanji.
A Qoraxda Weli waxaan u arkaa mid aad u cagaaran si aan uga qaado laanta, si kastaba ha noqotee waxaan ka doorbidaa midkood labadii ikhtiyaar ee hore.
Midnimada fikrad ahaan waan jeclahay, ama halkii, waxay isu keentaa waxyaabo taxane ah oo aan jeclahay, badankooduna ka dhaxleen Mac OS sida:
- Baarka menu-ka ee guddiga.
- Badhamada bidix.
- Iyo launcher.
Hadda, ma adkeysan karo xitaa Dash, ama Lens. Isla isla waxbaa igu dhaca aniga Qolofta Gnome, taas oo ah inaad ku qasbanaato, tag Xusuus-dhaaf si aad u raadiso codsi ama aad u aragto kombuyuutarrada, ma jecli. Waana sababta aan qof walba u doorbido Qoraxda, wax walbaa waa wax caadi ah, fudud, fudud, miisaska si dhakhso leh ayaa loo galaa, xulashooyinka iyo in la dhammaystiro, waxay leedahay saameyn aad u qurux badan.
gunaanad: Gnome3 wuxuu yeelan karaa midnimo, qorfe iyo waliba qolofkeeda (gnome shell).
Waxaan haystaa ubuntu oo waqtiga aan galayo eraygayga sirta ah waxaan dooran karaa inaan isticmaalo gnome qolof ama midnimo ama qorfe .. Dhammaan 3 qolof ayaan ku hayaa nidaamka waxaanan isticmaali karaa midka aan doonayo DIGNIIN (kalfadhiga xiritaanka iyo xulashadiisa) 😉
Waqtigan xaadirka ah tartanku waa adag yahay .. maxaa yeelay kala-soocaasi wuxuu bilaabmay dhawaan markii Gnome3 uu soo baxay .. dadka isticmaala qaarkood ma jecla qolofta genome waxayna doorbidayaan midnimada .. kuwa kale ma jecla qolofta gnome ama midnimada laakiin waxay jecel yihiin qorfaha .. iyo waxaa jira kuwa kale oo aan jeclayn inay isticmaalaan qolofka kale laakiin gnome-kiisa.
Taasi waa sababta aan aad ula dhacsanahay KDE maxaa yeelay gudaha KDE ma ku arkaysid waxyaalahan oo kale .. ma jiro kala soocid .. waa jawi adag. Laakiin wali waxaan aad ula qabsaday Gnome 3 iyo qoloftiisa ..
Waxaan isku dayay inaan u dhaqaaqo KDE laakiin lamaan baran, madaama ay jiraan codsiyo gnome ah oo leh maktabado GTK oo aan si fiican uga shaqeyn KDE. ama iyagu kaliya uma muuqdaan kuwo wanaagsan laakiin qalaad ahahaha si kastaba ha ahaatee. Laakiin KDE way fiicantahay .. Gnome 3 way fiicantahay .. Kawaran hadii ay rabto waa in Gnome kala taggu uu ku dhamaan doono waana sidii uu ahaan jiray, jawi kaligiis ah oo gaar ah oo aan lahayn qolof ama dhar aad u tiro badan .. Sidoo kale dharka waa qaali AJAJAJAJAJAJAJAJAJA
elav <° Linux Waad saxan tahay ... Waxaan u maleynayaa in qorfaha uu noqon doono qolofka loogu jecelyahay dad badan sababahaas aad hada sheegtey.
Waxaan u baahanahay in aan sheego in qorfe aan laga qaadin xulashadeeda ugu fiican si ay si sax ah ugu shaqeyso 😉
Waqti ayaan siinayaa qorfe ilaa ay quruxsan tahay oo quruxsantahay 😀 Dhanka kale waxaan isticmaalaa qolofta gnome CoverFLow si aanan ugu aadin OverView oo aan u helo codsi.
Midnimadu waa fikrad aan jeclahay, ama halkii, waxay isu keentaa waxyaabo taxane ah oo aan jeclahay, badankooduna ka dhaxleen Mac OS sida:
Baarkaasi wuxuu u eg yahay kan NEXTSTEP ka badan in macOS XSida menu ... um ... haa, waa run in ay u shaqayso ku dhowaad isku mid laakiin kan Midnimada waxay leedahay xagal baxsasho oo aad u liidata looguna talagalay inay noqoto mid aad u dhib badan. Midnimada Waxaa loogu talagalay in loo isticmaalo mobilada iyo miisaska, si fiican.
Ogeysiiska horay ayaa loo sameeyay
Waan ku rakibay Linux Mint 12 waanan jecelahay sida ay wax u socdaan, ma aqaano hadii ay taydu tahay laakiin waxaan dareemayaa muuqaalka cuntada oo dheecaan badan leh Weli lama heli karo kaydinta Mint 12 laakiin dabin yar ...
Weligay fursado intaa le'eg ma siinin barnaamij. Nasiib darrose, ka dib markii la rakibay darawalada cusub iyo 12.2 iyo qorfe 1.4, dhibaatooyinka ayaa sii jiraya qorfe na wuxuu nidaamka ka dhigayaa mid aan degganeyn hambalyo ayaan u dirayaa kuwa ku raaxeysta waxqabadka barnaamijkan oo wali ka mamnuuca isticmaalayaasha Ati.
Waxaan aadaa gurigeygii, waxaan dib ugu laabanayaa midnimadii.
Kuwa leh KDE way culustahay waxayna ogaadeen in Cinamon, midnimo iyo Gnome Sell ay sifiican ushaqeeyaan waxaan kugula talinayaa sida ay horeyba u dhaheen inaad joojiso waxyeelada. 3 madfac oo hal mashiin ah oo meherad leh oo leh Arch (kayar Midnimo) oo wata 512mb oo wan iyo kaar video ah oo aan taageereynin dardargalinta dhabta ah ee 3d isla markaana midka kaliya ee loo oggol yahay in la isticmaalo uu ahaa KDE, inta hartay haddii ay bilaabeen, way isdaba marinayeen, I waxaad dhahdaa maxaa yeelay Gnome Shell xitaa wuu shaqeeyay waxaan u maleynayaa in qolofyadan ay yihiin kuwo aan u bisleyn sida Gnome, waqti kadib waxaad arki doontaa natiijooyin ka wanaagsan sida horumarka u socdo. Waxaan aaminsanahay in KDE mar hore ku safartay wadadaas turunturooyin badan oo ka badan Gnome laakiin hadda wax badan ayey soo hagaagtay.
Laakiin waa maxay waa maxay dareenka isticmaalka wax la kala doorto ikhtiyaarradeeda ugu fiican si ay si sax ah ugu shaqeyso? Taasi waa wax aan ka jeclahay Xfce, in kasta oo saamayntoodu fudud tahay, waxay noqon karaan kuwo aad u qurux badan oo ugu fiican dhammaan, ma jiro cunno dheeraad ah.
Wao waxaan tijaabinayaa qorfe 1.4 (O__O) aad u qurux badan ahahahaha
Phew, waxaan u maleynayaa in qof uu joojin doono isticmaalka gacalkooda Gnome Shell
AJAJAJAJAJAJAJ ... taasi waa wax aad u fiican .. oo shaqo wanaagsan oo taas oo kale ah ayaa wax yar ka dhakhso badan 🙂
elav <° Linux ma isiin kartaa xiriirka halka lagu sharaxay sida loo qaabeeyo wakiilka isticmaalaha? Fadlan
Hagaag, maaddaama ay jiraan dhadhamin wax walba, waxaan doorbidayaa kubeelka iyo saameynteeda Kubuntu.
OpenLibra: maktabadda bilaashka ah
La heli karo "si rasmi ah" si loo soo dejiyo Firefox 11